7 mhando dzemakambani ekushambadzira anonyanya kushandiswa muCommerce | ECommerce nhau
7 mhando dzenzira dzekutengesa
Encarni Arcoya | 23/07/2021 11:48 | eCommerce
Kana zvasvika pakushambadzira, hapana zano rimwe chete. Zvichienderana nechinangwa chauri kuzviseta, pane akasiyana maratidziro ekushambadzira uye kuziva mamwe acho kunogona kukubatsira kunatsa zvaunofanira kuita kuzadzisa icho chinangwa chauri kutsvaga.
Saka, kana iwe uchida kuziva kuti zano rekushambadzira chii pamwe neiyo mhando dzekutengesa nzira dziripo uye zvakajairika kushandisa, pano tinokusiira zvese zvirimo kuti unzwisise zvatinoreva uye izvo zvinoshandirwa neumwe neumwe.
1 Ndeipi nzira yekutengesa
2 Mhando dzenzira dzekutengesa dziripo
2.1 Segmentation zano
2.2 Kukwikwidza-kwakavakirwa zano
2.3 Positioning zano
2.4 Dhijitari yekushambadzira zano
2.5 Zvemukati zvekushambadzira zano
2.6 Kuvimbika zano, imwe yeasina kushandiswa mhando dzekambani nzira
2.7 Brand mumiriri mazano, emhando dzazvino marongero ekushambadzira
Ndeipi nzira yekutengesa
Tinogona kutsanangura zano rekushambadzira senzira iyo iyo kambani inoshandisa zviwanikwa zvayo kuzadzisa chinangwa chakatemwa, icho chinowanzo wedzera kutengesa kana kuyedza kumira kubva kumakwikwi. Mune mamwe mazwi, ivo vari zviito zvinoitwa nebhizinesi kuzadzisa chinangwa chine chekuita nekuvandudza mune zvabuda. Kuti vaite izvi, zvinangwa zvavanofanira kuseta zvinofanirwa kusangana nematanho ehunhu:
Kuti ivo vakanangana, ndiko kuti, ivo vanoreva kune chimwe chinhu chakatarwa icho iwe chaunoda kuzadzikisa.
Inogona kuyerwa, kuti pane maturusi ekuziva kana icho chinangwa chazadzikiswa.
Izvo zvinokwanisika, nekuti iwe unoda chinangwa chinogona kunyatso kuitwa.
Inoshanda, mukuti inofanirwa kuve inoenderana nekambani.
Mukati meiyo nzira yekutengesa, inoshanda pambiru ina zvakakosha zvekambani:
Chigadzirwa kana sevhisi, ndiko kuti, izvo zvatinotengesa kana kupa kune vatengi.
Kukwidziridzwa, kungave kudzikisira, kupihwa, nezvimwe.
Iyo poindi yekutengesa kana kugovera. Nzira dzakasiyana dzekutengesa dzaizopindawo pano, zvese zvepanyama uye online.
Mhando dzenzira dzekutengesa dziripo
Zvino zvaunoziva zvirinani zvirinani zano rekushambadzira, izano rakanaka kwauri kuti uzive kuti kune marudzi akasiyana enzira dzekushambadzira sezvo, kana uchizviziva, iwe unozogona kuziva kuti ndeipi yakakodzera kupfuura icho chinangwa chauri kufunga kuzadzikisa.
Kune marudzi mazhinji, asi akajairika ndeaya anotevera:
Yakave ine mukurumbira makore mashoma apfuura, uye chokwadi ndechekuti ine chikonzero chayo chekuve. Vazhinji vanogona kunyorera kune peji, asi munhu wega wega aizoverengerwa muboka zvinoenderana nezera ravo, zvekuzvivaraidza nazvo, manakiro ... Kana iwe ukaita yekushambadzira zano kushaya chakanangwa mutengi, hazvishande. Naizvozvo, zano rezvikamu rakavakirwa pa kamura vateereri vauinavo mumapoka madiki ane zvido, mazera, nezvimwe. zvakajairika.
Semuenzaniso, fungidzira iwe uine online yekutengesa chitoro. Iwe une vazhinji vanonyoresa, asi vamwe vane vana uye vamwe vasina ivo (ivo vazhinji vateresi). Saka kukwidziridzwa kwaunopa dhisikaundi pamwana, kune iri boka rechipiri raisashanda. Uye iwe waizorasikirwa nevatengi mune ino kesi.
Munyaya iyi, the Kukwikwidza chinhu ndiko kunotonga mhando yezviito zvinofanirwa kuitwa. Kuti tiite izvi, isu tinoedza kugadzirisa zvichibva pamakwikwi ekupa zvakawanda, kana zvakachipa, zvinopesana navo nechinangwa chekukwira zvinzvimbo.
Hunhu hwezvigadzirwa uye / kana masevhisi aunopa, mutengo, sevhisi, kana kuwanikwa kwezvigadzirwa zvimwe zvinhu zvinogona kukanganiswa nemakwikwi. Pasina kukanganwa kushambadzira uye kugadzirisa mufananidzo wekambani.
Ichi ndicho chinhu chekupedzisira chatakambotaura newe nezvazvo kare, ndiko kuti, kugadzira iyo mhando inozivikanwa zviri nani nevatengi. Muchiitiko ichi, pachega iri zano rinofanirwa kutariswa kusimudzira kutengesa uye nemashandisirwo evatengi, vatengi kana kwete.
Dhijitari yekushambadzira zano
Mukati mekushambadzira kwedhijitari isu tinogona kusanganisira dzakasiyana nzira dzekushambadzira, asi ese akavakirwa paInternet. Mune ino kesi, isu tinogona kukutora mazwi:
Inbound kushambadzira, uko kungave kukwezva vashandisi uye kuvashandura kuva vatengi, uchishandisa zvinobatsira zvemukati.
E-mail, mupfungwa yekuti inotsvaga kutanga kutaurirana nevaya vashandisi. Iwe unofanirwa kuve wakangwarira, nekuti kana ukangoerekana watanga kushandisa iyo data pasina mumwe munhu avapa mvumo, zvino inogona kutariswa sekupindira, pamusoro pekushandisa data rechinhu chisina kupihwa mvumo.
Zvemagariro midhiya. Inowedzera kushandiswa uye imwe nzira yekutaurirana nevashandisi.
Injini dzekutsvaga, kunyanya padanho rewebhu, kuti iro peji kana eCommerce iri munzvimbo dzepamusoro uye iratidzike.
Zvemukati zvekushambadzira zano
Izvo zvemukati zvekushambadzira zano zvisati zvaonekwa sechimwe chinhu mukati meiyo yaive yekushambadzira kwedhijitari. Asi yakawana kukosha kwakanyanya uye mukurumbira zvekuti ikozvino chaonekwa sechinhu chakaparadzaniswa.
Izvo zvinoenderana nekushandisa zviwanikwa ku kukwanisa kugadzirisa chinzvimbo pamwe nemukurumbira wechiratidzo kuburikidza nezvinyorwa. Kune izvi, iyo blog, infographics, ebook ... zvakakosha uye ivo vanokwanisa kubatana nevanhu.
Zvino, kunyangwe iwe uchigona kufunga kuti chero munhu anogona kunyora, chokwadi ndechekuti chete avo vanoziva "kugona" mazwi ndivo vanozogona kunyora zvinyorwa zvinonzwira tsitsi nevashandisi.
Kuvimbika zano, imwe yeasina kushandiswa mhando dzekambani nzira
Kwenguva yakati ikozvino, zvakaonekwa kuti zvakaenzana sei kana zvakanyanya kukosha kutarisira vatengi, kwete kungozvibvisa pazviri nekukurumidza kana odha yaendeswa. Kunonzi kuvimbika, uye kunosanganisira teerera kumhinduro yako, asiwo kukupa kukwidziridzwa, mitengo, makadhi ekuvimbika, nezvimwe.
Mune mamwe mazwi, iyi ndeye yakasarudzika sevhisi sevhisi inoenderana nehukama hunoitika mumabhizinesi echinyakare (epanyama).
Brand mumiriri mazano, emhando dzazvino marongero ekushambadzira
Iyi ndeimwe yekupedzisira yaonekwa uye iri kukonzeresa nekuti, neimwe nzira, iwe unoshandura mutengi kana mushandisi kuva mumiriri wechiratidzo nenzira yekuti vanosimudzira zvigadzirwa zvako uye / kana masevhisi mukutsinhana nebasa riri nani, mutengo, zvipo kana kunyange mibairo yemari.
Izvi zvinokutendera iwe kuti usvike kune vanhu vazhinji, sezvo iwe uchibatanidza vateveri vemunhu iyeye.
Sezvauri kuona, kune zvakawanda zvekusarudza kubva, izvi zviri zvakajairika uye zvinoshandiswa nemakambani. Zvisinei, iwe unofanirwa kuyeuka kuti kushambadzira isainzi inoshanduka uye inochinja zvakanyanya pamusoro pemakore, saka marongero matsva anogara achibuda uye mamwe anokanganikwa. Iwe unoziva here mamwe marudzi emaitiro akakosha ekutengesa? Tizivise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » 7 mhando dzenzira dzekutengesa
Maitiro ekushambadza pa Instagram
Iwo mana akanakisa mapeji ekutsvaga basa